काठमाडौं। गरिव दु:खीहरुलाई सकेको सहयोग पुर्याउँदै आएको संस्था हेम एण्ड माया फाउण्डेसन नेपालले देशमा जारि लकडाउनले धेरै नै समस्यामा परेका पीडितहरुमा राहत सहयोग बितरण गरेको छ।
अन्त्यन्तै पीडामा रहेका सातै प्रदेशका बिभिन्न बर्ग समुदायमा तत्काललाई भोको पेट रहन नदिन फाउण्डेसनले आफ्नो संजाल मार्फत राहत बितरणको काम गरिएको बताएको हो।
फाउण्डेसनकी कोषाध्यक्ष जमुना राईले जनाए अनुसार अनुमानित २० लाख बढी रकम बराबरको चामल लगायतको खाद्धान्न बिभिन्न लक्षीत समुदायमा बितरण गरिएको छ। आज के खाउ भरे के खाउँ भन्ने मजदुरहरुदेखि धेरै जना बस्ने बादी बस्ती तथा चेपाङ बस्तीमा पुगेरै राहत बितरण गरेको कोषाध्यक्ष राईले जानकारी दिईन्। "हामी सक्रिय सदस्य तथा अन्य स्वयंसेवक कन्चनपुरको बादी बस्ती तथा मकवानपुरको चेपाङ बस्तीमा पुगेरै वहाँहरुको आहतमा राहत दिन पुग्ने काम गर्यौं", दोबाटो न्यूजको जिज्ञासामा उनले भनिन्,"गरिव मात्रै हैन समाजमा पहिलेबाटै पछि परेको समुदायमा पहिले पुग्नुपर्छ भन्ने फाउण्डेसनका संस्थापक हेम दाई र माया भाउजुको ईच्छा र लक्ष पनि भएकाले राहत बितरणमा समुदायलाई बढी प्राथमिकता दिएका हौं। "
राहत सहयोग गर्ने क्रममा मकवानपुरको चेपाङ् बस्तिमा १०० बोरा चामल, १०० किलो दाल १०० किलो नुन त्यस्तै बादी बस्ती कन्चनपुरमा पनि १०० बादी घर-परिवारलाई १०० बोरा चामल, १०० किलो दाल र १०० किलो नून नै दिईएको कुरा उनले बताईन्।
काठमाडौमा जनआन्दोलन र जनयुद्धपीडितका घाईते ६० घर-परिवारलाई पनि त्यसरी नै ६० बोरा चामल ६० किलो दाल तथा ६० किलो नूनको हिसाबले पेट भोको हुन नदिएको कुरा कोषाध्यक्ष राईले जनाईन्।
उपलब्ध बिबरण अनुसार फाउण्डेसनले यसका अलाबा मोरङको उर्लाबारीमा गिटी कुटेर खाई आएको श्रमीक परिवार रहेको तर लकडाउनले काम बन्द भै गार्हो परेकोमा २५ परिवारलाई २० बोरा चामल लगायतको खाद्धान्न पुर्याएको छ। पिडामा परेकालाई देशैभर अवस्था हेरी दु:खी गरिवलाई सेवा गरेको र आवश्यक परे अझै राहत बितरण गर्ने फाउण्डेसनले बताएको छ।
झापा लगायतका ठाउँमा गरेर प्रदेश १ मा जम्मा ३ सय ५१ वाेरा चामल, दाल, नून बितरण गरिएको तथा काठमाडौं गोकर्णको 'संयुक्त एकता आवाज केन्द्र' तथा नारायणटारको 'स्पाईनल कर्ड ईन्जुरी नेटवर्क नेपाल'का फरक शारिरीक अवस्था भएका पीडितलाई खाद्धान्नको सहयोग पुर्याईएको फाउण्डेसनका ब्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेर सहयोग पुर्याउने पूर्व मन्त्री पदम राईले बताए।
‘म्याग्दीकी पुजा खत्रीलाई फाउण्डेसनले पढाईरहेछ’
यो यहि संस्था हो जुन संस्थाले म्याग्दी बेनीबजारकी गरिव बिध्यार्थी पुजा खत्रीको लालन-पोषण र पढाईको सम्पूर्ण जिम्मा लिएको छ।
बुबा आमा बिचको आन्तरीक कलहले गरिवीमा हुत्तिएकी बालिका पुजा खत्रीले आफ्नो बिध्यालयका प्रधानाध्यापकलाई आफ्नो नाम बिध्यालयबाट काटिदिन चिट्ठी लेखेपछि त्यसलाई सामाजिक संजालमार्फत देखेर अमेरीकामा बस्ने हेम तथा माया थापा दम्पतीले अहिले उनको सम्पूर्ण शिक्षा, पालन पोषणको जिम्मा लिएका छन्।
'आज मात्र हैन म पहिलेबाटै गरिब दुःखीको दुःख देख्न सक्दिन'
नेपालको तेह्रथुम जिल्ला मोराहाङ्ग जन्मस्थान भई बिगत १३ बर्षदेखी अमेरिकाको न्यूयोर्क शहरमा बसोबास गर्ने फाउण्डेसनका मुख्य संस्थापक हेम थापासँग हामीले छोटकरीमा कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ प्रधान सम्पादक सुदीप अधिकारीले समाजसेवी हेम थापासाँग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश।
हेमजी, कस्तो छ यहाँहरुलाई ?
हजुर, हामी ठिक छौ।
तपाईंहरुको फाउण्डेसनले अहिलेको यो लकडाउन र माहामारीको बेलामा नेपालमा धेरै ठाउँमा राहत बाडिरहेछ। के कुराले यो अभियान शुरु गरौं भन्ने लाग्यो ?
देशमा जनताको धेरै ठूलो भाग दैनिक काम गरि खाने मजदुर बर्ग, शारिरीक अशक्त बर्ग, पिछडिएको समुदाय छ। यी सबै बर्गलाई यस्तो परिस्थितीमा सहयोग पुर्याएन भने ज्यानकै खतरा पो हुन्छ कि भन्ने देखेर यो राहतको काम हामीले तुरुन्तै शुरु गरेका थियौं। मेरो आज मात्र हैन, गरिब दुःखीको दुःख म देख्न सक्दिन।
एकदमै। यो भावना हुने मानिस मात्रै लामो समय नियमित अरुलाई सहयोग गर्न तत्पर भईरहन्छ।
तपाईलाई अरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने परिवारको कुनै प्रेरणा पनि छ कि ? सानोबाट ? त्यस्तो कुनै ?
बुबाबाट। बुबाबाट देखेर अनि वहाँको तरिकालाई अहिले म पनि पछ्छ्याउँदै छु।
बिदेश होस् स्वदेश होस् पैसा कमाउन कति मेहनत गर्नुपर्छ। रपनि तपाईं यत्रो खर्च कसरि ब्यवस्थापन गर्नुहुन्छ किनकि अहिले अमेरिकामा नै आर्थिक संकट छ ? यो त सार्है गार्हो काम पो हो त !
अहिले त सबै रिन गरेर हो। गर्नु त छँदैछ।
अनि रिन तिर्न सकिएला ?
सकिन्छ भन्ने आशामा छु।
अनि हेमजी, तपाईंहरुले सामाजिक काम गर्न पहिलेबाटै फाउण्डेसन स्थापना गर्नुभएको छ। यदि यो लकडाउन नआइदेको भए तपाइँहरुको फाउण्डेसनले कुनै काम, सेवा गर्ने केहि तयारी पनि थियोकी ?
मकवानपुरमा चेपांग बस्ती बनाउने तयारी थियो।
कति घर बनाईदिने योजना थियो ?
३० देखि ५० घर। २ देखि ३ करोड खर्च हुन सक्छ होला।
अनि तपाईं न्यूयोर्कमा हुनुहुन्छ। आफू कोरोनाबाट कसरी सुरक्षित हुने प्रयास गर्नुभएको छ र अरु नेपालीलाई सुरक्षित रहन के भन्नुहुन्छ ?
यहाँ पनि अहिले बिश्वका अन्य स्थान जस्तै कोरोना संक्रमणबाट बच्नको लागि एउटै उपाय, साबुनपानीले हात धोईरहने, मास्क अनिवार्य लगाउने, सामाजिक दुरी कायम राखेर मात्रै बाहिर हिंड्ने गरिरहेछौं। म सम्पूर्ण यहाँ न्यूयोर्क र नेपालका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमा घरमै उपलब्ध बेसार, अदुवा तातोपानी खाईरहने, चिसोपानी नखाने जस्ता घरेलु बिधी अपनाएरै आफूलाई कोरोनाको संक्रमणबाट टाढा राख्ने प्रयास गरौं भन्छु।
तपाईंलाई केहि भन्नु छ ?
मलाई धेरै केहि भन्नु त्यस्तो केही छैन। म आफ्नो काममा यहाँ परिवारसहित दत्तचित्त भएर एकोहोरो भएर काममा लागेको छु। जन्मभूमि देशका गरिव, पिडामा परेका, तल परेको समुदायलाई सकेको सहयोग निरन्तर गरिरहने सोचमा छौं। तेत्ती हो।
कोरोना कहर:गाईभैँसीलाई पनि मास्क !